विचार / अभिमत – Page2– Dnewsdaily.com – Dhading's First Online News Portal
धादिङबेसीमा विपन्न र असहायका लागि निःशुल्क भोजन
अवकाशको नाममा १५ अर्ब स्वाहा
कर्मचारी अभावले स्थानीय तह र प्रादेशिक कार्यालय अलपत्र छन् । तर, केन्द्रका अनुभवी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशका नाममा धनराशि बोकाएर बिदा गरिँदै छ । राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तन संस्थागत गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा सरकारले करिब पाँच हजार अनुभवी कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई..
शनिबार ३१ जनाको ज्यान जाने गरी त्रिशूली नदीमा भएको कहालीलाग्दो बस दुर्घटनाले फेरि एकपटक सबैलाई सडक सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुन झकझक्याएको छ । उक्त घटनाको भोलिपल्टै पुनः चितवनकै बस र ट्रिपर ठोक्किँदा २४ जना घाइते भएका छन् । नेपाल प्रहरीबाट दुर्घटनाको विवरण लिएर हेर्ने हो भने प्रायः दसैं–तिहारपछि कात्तिक लाग्नासाथै..
पृष्ठभूमिः अहिले दार्जिालिङमा नेपाली भाषिक आन्दोलन चर्कदै छ । वेष्ट बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बेनार्जीले स्कुलमा बंगाली भाषा अनिवार्य लागु गरेदेखि नेपाली भाषीहरुले आन्दोलन अगाडी बढाएका हुन । अहिलेको ताजा माग नेपाली भाषा भएतापनि मुख्य माग भारतमा छु्टटै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग हो । दार्जिलिङ तथा यसको वरिपरि बसोबास गर्ने..
हरिराम कोइराला देश विकासको क्रममा ऊर्जाको विकास सँगसँगै भएन भने देशको विकास यथार्थपरक एवं सामयिक भएको भनेर भन्न सकिन्न । ऊर्जाका स्रोतहरूमध्ये विद्युत्बाट प्राप्त ऊर्जाको उपयोग सहज, सरल एवं किफायिती देखिएको छ र संसारभरि यसको उत्पादन तथा उपयोग बढ्दै गएको देखिन्छ । विश्वको परिप्रेक्ष्यमा ब्राजिलपछि अग्रस्थानमा रहेको..
[caption id="attachment_28282" align="alignnone" width="1343"] रवीन्द्र मिश्र[/caption] रबिन्द्र, तिमीले अहिले सम्म आफ्नो पेशाबाट पुर्याएको योगदानलाई साधुबाद.... जहिले सत्य को पक्षमा बोल्यौ, लड्यौ र सकारात्मक सोच लिएर राष्ट्रका लागि समर्पित भएर काम गर्यौ! आफ्नो बिषिष्टअनुभव र बुझेका सांसारिक ज्ञान र निर्दिष्ट तत्वबोधहरु निर्धक्क भएर पस्क्यौ! कहिले डग्मगाएनौ आफ्नो प्रगतिशिल..
सूर्य थापा नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली श्रमजीवी पत्रकारको छाता संगठन हो । यसले विगत साँढे ६ दशकदेखि आफ्नो सक्रियता र क्रियाशीलता कायम गर्दै आफूलाई स्थापित गरेको छ । २००८ सालमा सत्यनारायणबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थापित यस संगठनले ०१२ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा पुनर्गठित हुने मौका पायो । अहिले महासंघ २५औँ..
(अ)प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू ! भन्नेले भन्छन्–– नाममा के छ र ! नाममा सबथोक छ । तपाईंका ३ वटा नाममा पनि सबथोक छ । गाउँतिर तपाईंलाई 'छविलाल' भन्छन् । तपाईंको नाममा हजारौं नेपालीको 'लाल' रगतको 'छवि' पोतिएको छ । मर्नेहरू त मरेर गए, बाँच्नेहरूको अनुहारबाट तपाईंको त्यो छवि कहिल्यै मेटिएन । गाउँबाट जंगल छिर्नुअघि मान्छेले तपाईंलाई 'पुष्पकमल' भनेर..
रूपनारायण खतिवडा गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पलगत्तै यसबाट गम्भीर क्षति व्यहोरेका छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई एकीकृत वस्तीका रूपमा निर्माण गरिनुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण महाअभियानलाई व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि उपयुक्त पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरिनुपर्ने अपरिहार्यताका..
के सन् २०२० पछि अखबार बन्द होलान् ?
अखबारहरू कति समय टिक्लान् ? मेरो अनुमान, अर्को चार वर्ष । डिसेम्बर २०२० सम्ममा हामी बाँचिरहेका स्तम्भकारले पत्रिकाका लागि आफ्नो अन्तिम स्तम्भ लेखेका हुनेछौं । अखबारहरूले त्यतिखेरसम्म कागज नै पाउने छैनन् । भौतिक वस्तु त्यतिखेरसम्म अस्तित्वमा रहनेछैन र यसको कारण बुझ्न खासै गाह्रो छैन । अखबार चलाउनुको कुनै आर्थिक फाइदा हुनेछैन ।..
मेरो कथा – नबीन देखी अन्जली हुँदै ल्याक्मी फेशन वीकसम्म
म २०४२ साल जेठ ४ गते बुवा शुभनसिङ तामाङ र स्व.आमा सेल्जोम तामाङको कोखबाट नुवाकोट जिल्लाको काहुलेमा जन्मेकी हुँँ । मलाई घरमा सबैले "मेरे" भनेर बोलाउँदथे तर मेरेको अर्थ भने मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। ५ बर्षको उमेरमा विद्यालय भर्ना गरियो। विद्यालयमा मेरो नाम नबिन कुमार वाइबा थियो । अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा नबिन नै छ। सानोमा मलाई आमा..
बूढीगण्डकीको बहुपक्षीय लाभ बाँडफाँट
दस्ताबेज नेपालको एकमात्र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (६० मेगावाट) कुलेखानी पहिलो हो । सन् १९८२ मा सम्पन्न त्यस आयोजनापश्चात् नेपालमा कुनै पनि जलाशययुक्त आयोजना नबनेको अवस्था छ । भलै कुलेखानी पहिलोकै सञ्चित जलाशयको अधिकतम दोहन गर्न त्यसैको टेलरेसको पानी प्रयोग गरी थप विद्युत् उत्पादन गर्न ३२ मेगावाटको कुलेखानी..
धादिङ- विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोविद १९ ) को संक्रमण फैलन नदिन नेपाल सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनको कारण दुई साता देखि नेपाल ठप्प हुन पुगेको छ । लकडाउनको प्रत्यक्ष मारमा परेका अति.....
धादिङ- धादिङ जिल्लाका एम्बुलेन्स चालकहरुले लकडाउन शुरु भएको दुई साता विति सक्दा पनि एउटै पिपिई सेट लगाएर काम.....